အိန္ဒိယကိုမကြာခင်ရောက်ရှိတော့မယ့် Oneplus 5T ရဲ့ Lava Red Edition! – AsiaApps
Oneplus 5T ရဲ့ edition အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lava Red ဟာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ Amazon India ကသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ကစပြီး register လုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူအနေနဲ့ Amazon India ကိုသွားရောက် register လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Oneplus အနေနဲ့ 5T ဖုန်းမှာ အနီရောင်ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုက ဒါပထမဉီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်ကပြောင်လက်ပြီးထင်းနေတာကြောင့် ကျက်သရေရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Lava Red Edition ရဲ့ အရှေ့က edition တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sandstone White တုန်းကတော့ စျေးနှုန်းဟာ USD 559 အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ Lava Red Edition ဟာ Sandstone White Edition နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဒီဇိုင်းပိုင်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကသိသိသာသာမပြောင်းလဲသွားပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် Lava Red edition ရဲ့စျေးနှုန်းဟာလည်း USD ၅၀၀ ကျော်နားလောက်မှာရှိနေမှာပါ။ အိန္ဒိယမှာအသိတွေရှိရင်မှာယူ ကြပေါ့ဗျာ…
Learn more ? https://t.co/RsH6cbwCeK pic.twitter.com/nLcf6JYqCW
New Edition, Oneplus